OOTDMYANMAR – Page 15 – OOTDMYANMAR
KALAW OOTD PEGS
No Comments on KALAW OOTD PEGS
Kalaw isapopular hill station situated in Shan State.
ကလောမြို့ဆိုတာ ရှမ်းပြည်နယ်က လူသိများတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးပါ။
The weather here is enjoyable. It ranges from 8 degrees Celsius to 21 degrees Celsius for the months of January to early March.
အဲ့ဒီမှာ ရာသီဥတုက အရမ်းသာယာပြီး အေးချမ်းပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ က,နေ မတ် လ အစပိုင်းတွေမှာဆိုရင် ၈ ဒဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ် ကနေ ၁၂ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ် အထိရှိပါတယ်။
This weather is perfect to go sightseeing around the city of Kalaw.
အဲ့ဒီအချိန်လောက်ဆို ကလောမြို့လေးကို လည်ပတ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။
So, if you want to escape the hot weather in the City grab the opportunity to enjoy the cool weather in Kalaw.
မြို့ပြရဲ့ ပူလောင်မွန်းကျပ်မှုတွေကနေ လွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကလောရဲ့အေးမြတဲ့ရာသီဥတုလေးကို ခံစားရမယ့်အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံပါနဲ့နော်။
And if you are planning to go, we recommend these OOTD inspirations that would make your photos cooler:
သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်နိုင်မယ့် ဝတ်စုံလေးတွေ ရွေးချယ်ပေးလိုက်တယ်နော်။
Photo credits @songofstyle
Photo credits @rosieshoonlei/ Photo by @mia_aung
Photo credits @itszune
Now, where/what should we visit in Kalaw?
ကလောမြို့ရောက်ရင် ဘယ်နေရာတွေလည်ပတ်သင့်လည်းဆိုတာကို comment ပေးသွားကြပါဉီးနော်။
Tags Fashion, ootdmyanmar
TOP PLACES TO VISIT FOR 2020
No Comments on TOP PLACES TO VISIT FOR 2020
၂၀၂၀ မွာ ဦးစားေပး သြားသင့္တဲ့ခရီးစဥ္ေတြ
Photo Credits @saw_thunder_myint
Saw Thunder Myint of I Write I Travel is one of our country’s top Travel Blogger.
Here she shares her top destinations for year 2020.
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေကာင္းဆံုး ခရီးသြား Blogger ေတြထဲက တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ I Writer I Travel ရဲ႕ပဲ့ကိုင္ရွင္ Saw Thunder Myint က ၂၀၂၀ မွာ သြားသင့္တဲ့ ခရီးစဥ္ေတြကို မွ်ေ၀ေပးထားပါတယ္။
Photo Credits @visitgreece
A country in southeastern Europe with thousands of islands Greece is known for its beaches, from the black sands of Santorini to the party resorts of Mykonos.
ဥေရာပရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ ဂရိႏိုင္ငံကေတာ့ လွပတဲ့ကမ္းေျခေတြ၊ Santorini ရဲ႕ အနက္ေရာင္ သဲေတြ နဲ႕ Mykonos ရဲ႕ party resort ေတြေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးပါတယ္။
Photo Credits @lucy_ella1996
An Indonesian island known for its forested volcanic mountains, iconic rice paddies, beaches and coral reefs. The island is also known for its yoga and meditation retreats too.
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီကၽြန္း ကေတာ့ မီးေတာင္ရယ္ ၊ စိမ္းလန္းေနတဲ့သစ္ေတာေတြရယ္ ၊ စပါးခင္းေတြရယ္၊ ကမ္းေျခေတြနဲ႕ သႏၲာေက်ာက္တန္းေတြ ရယ္ေၾကာင့္ လူသိမ်ားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရာဂ နဲ႕ တရားထိုင္ ျခင္း တို႔ကလည္း ဘာလီ ကို နာမည္ႀကီးေစတဲ့အခ်က္ပါ။
#3 Turkey, Antalya
Photo Credits @visitantalaya
Antalya ဆိုတာ တူရကီၿမိဳ႕ရဲ႕ တိုးတက္မႈအျမန္ဆံုးျမဳိ႕ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ကမ္းေျခအလွနဲ႕ တူရကီယဥ္ေက်းမႈကို ေလ့လာခ်င္တဲ့ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားေတြအတြက္ မ်က္စိက်ခ်င္စရာေနရာျဖစ္ပါတယ္။
Photo Credits @backpackersglobal
The Philippines,acountry of islands, and is popular for its water and land activities. Boasted with one of the longest coastlines in Asia, it’s worthatravel here for its serene beaches and crystal clear waters. Some of the more noted beaches include Boracay Island, El Nido, and Camiguin Island.
ကၽြန္းေတြနဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ က ေရေပၚသာမက ေျမေပၚမွာပါ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အပန္းေျဖစရာေတြေၾကာင့္ လူသိမ်ားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အာရွမွာ အရွည္ဆံုးပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သာယာလွပတဲ့ကမ္းေျခေတြနဲ႕ ၾကည္လင္ေနတဲ့ေရေတြက ဖိလစ္ပိုင္ ကို သြားလည္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုပါ။ ဖိလစ္ပိုင္ ရဲ႕ နာမည္ႀကီးလူသိမ်ားတဲ့ ကမ္းေျခေတြကေတာ့ Boracay ကၽြန္း, El Nido ကၽြန္း နဲ႕ Camiguin ကၽြန္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
Photo Credits @uzbekistan
Uzbekistan က အာရွရဲ႕ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အရင္ကေတာ့ ဆိုဗီယက္သမၼတ ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဗလီေတြ၊ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္ေတြ အျပင္ တ႐ုတ္ နဲ႕ ေျမထဲပင္လယ္ၾကားက ေရွးေဟာင္းကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္တဲ့ Silk Road န႔ဲ ဆက္စပ္ေနတဲ့ဧရိယာေတြက Uzbekistan ကိုေရာက္ရင္ မျဖစ္မေနသြားေရာက္လည္ပတ္သင့္တဲ့ေနရာေတြပါ။
#6 Northern Chin State
Nothern Chin State is on her top of the list. With its huge mountains and picturesque views it will blow your mind. #6 Northern Chin State
ခ်င္းျပည္ေတာင္ပိုင္းကေတာ့ သြားသင့္တဲ့ ခရီးစဥ္ရဲ႕ ထိပ္ဆံုးမွာရွိေနပါတယ္။ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕ၿပီး အဆံုးမရွိတဲ့ ေတာင္တန္းေတြနဲ႕ ပန္းခ်ီကားလိုထင္မွတ္မွားရေလာက္ေအာင္ လွပလြန္းတဲ့ရွဳခင္းေတြက စိတ္ကိုၿငိမ္းခ်မ္းေစမွာ အမွန္ပါပဲ။
How about you where are your top list to travel for 2020? Comment below, we would love to know
အခ်စ္တို႔ေရာ ၂၀၂၀ မွာ သြားဖို႔စဥ္းစားထားတဲ့ ခရီးစဥ္ေတြရဲ႕ ထိပ္ဆံုးက ဘယ္ေနရာေလးျဖစ္မလဲ။ ေအာက္မွာ comment ေလးနဲ႕ေျပာျပေပးပါဦးေနာ္။
Tags 2020, ootdmyanmar, travel
No Comments on TIPS FOR GOOD MENTAL HEALTH
ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုတာက နေ့စဉ်ဘဝမှာ စိတ်ကျန်းမာရေးအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတာထက်ပိုပါတယ်။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက် ၈ ချက်ထဲကအတိုင်း ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကို တည်ဆောက်ကြရအောင်။
1. Build relationships (ဆက်ဆံရေးတွေကိုတည်ဆောက်ပါ။)
Having good relationships with other people is the most important factor contributing toasense of wellbeing.
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းက စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။
2. Exercise and stay healthy (လေ့ကျင်ခန်းလုပ်ပါ၊ ကျန်းမာအောင်နေပါ။)
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကလည်း စိတ်ကျခြင်းနဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျများခြင်းကိုလျှော့ချပေးယုံတင်မကဘဲ စိတ်ချမ်းသာမှုကိုတိုးပွားစေပါတယ်။
3. Develop gratitude (ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာတွေကို မှတ်သားထားပါ။)
Count your blessings. Try keepingagratitude journal and write down3positive things each day.
မှတ်စုစာအုပ်တစ်အုပ်လုပ်ထားပြီး နေ့တိုင်းမှာကိုယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အရာသုံးခု ကိုချရေးပါ။
4. Identify and use your strengths (ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကိုရှာဖွေပါ၊ အသုံးပြုပါ။)
လူတိုင်းမှာ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက် နဲ့ ကိုယ်က ဘယ်နေရာတွေမှာထူးချွန်လဲဆိုတာကိုရှာဖွေအသုံးပြုခ​ြင်းကလည်း စိတ်ချမ်းသာမှုကို တိုးပွားစေပါတယ်။
5. Give to others (တခြားလူတွေကိုမျှဝေပါ)
Makingacontribution to the community, however small, increases social wellbeing. Take some time to do the things you really enjoy.
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။ ဘယ်လောက်ပဲသေးငယ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါစေ သူတို့နဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးခ​ြင်းကလည်း စိတ်ချမ်းသာစေပါတယ်။ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ အချိန်သပ်သပ်ထားပါ။
6. Spirituality or religion (ဘာသာရေးကိုလေ့လာလိုက်စားပါ။)
တစ်ချို့အတွက်တော့ ဘာသာရေးလိုက်စားခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်းတွေက စိတ်ရဲ့င​​ြိမ်းချမ်းမှုကို ရရှိစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးလက္ခဏာတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ယုံကြည်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားခ​ြင်း၊ တရားထိုင်ခ​ြင်း၊ ဆုတောင်းခ​​ြင်း၊ စိတ်ကိုရှင်းလင်းအောင်ထားခ​ြင်း ဒါမှမဟုတ် ရောဂ နဲ့ ထိုက်ချိ ကစားခြင်းတို့ကလည်း စိတ်ချမ်းသာမှုကိုတိုးပွားစေပါတယ်။
7. Seek help (အကူအညီတောင်းပါ။)
If you are struggling to feel happy, cope with everyday life, find meaning or feel connected to others, see your doctor oramental health professional.
စိတ်ပျော်ရွှင်မှုရအောင်လို့ ခက်ခက်ခဲခဲက​ြိုးစားနေရတယ်၊ နေ့တိုင်းကို ပင်ပင်ပန်းပန်းဖ​ြတ်သန်းနေရတယ်၊ တစ်ခြားလူတွေနဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေရတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ကျွမ်းကျင်တဲ့
Article originally from http://www.healthdirect.gov.au
BTS DROPS A NEW SONG
No Comments on BTS DROPS A NEW SONG
Last January 17, K-pop supergroup BTS droppedanew music video. An inspired art film for “Black Swan,” which isapre-release track for their upcoming album, Map Of The Soul: 7. Unlike previous BTS music videos, “Black Swan” does not feature any BTS member. Instead, the video feels very raw and stripped down. It puts center stage the elaborate choreography by Slovenia-based dance group, MN Dance Company.
နာမည်ကြီး K Pop အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BTS က ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့မှာ music video အသစ် ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ music video ကတော့ နာမည်ကြီး Black Swan ရုပ်ရှင်ကို မှီငြမ်းထားတာဖြစ်ပြီး BTS ရဲ့ သီချင်းအယ်လ်ဘမ်အသစ် Map Of The Soul:7 ကို မဖြန့်ချီမီမှာ အကြို ထွက်ရှိလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခြား ထွက်ရှိပြီးသား music video တွေနဲ့မတူတာကတော့ “Black Swan” music video မှာ BTS member တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဒီ music video ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒီ Music video ကို Slovenia အခြေစိုက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့ MN Dance Company က အကပညာရှင်တွေက အကောင်းဆုံးပုံဖော်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Video and photo credits to BTS official.
Map Of The Soul:7will drop on February 21 and its lead single will be released on February 28.
Map Of The Soul:7အယ်လ်ဘမ် ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့ မှာထွက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီအယ်လ်ဘမ် ရဲ့ lead single ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ မှာ ထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Tags bts, international, ootdmyanmar
5 WAYS TO ROCK A FLARED JEANS
No Comments on5WAYS TO ROCK A FLARED JEANS
Flared jeans have been fashionable since the 1960s and they are currently enjoying yet another comeback.
Flared jeans တွေက 1960 ခုနှစ်ကတည်းက ခေတ်စားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဖက်ရှင်ကျတဲ့အမြင်အသစ်တွေနဲ့ နောက်တစ်ဖန် ခေတ်စားလာပြန်ပါပြီ။
So, here are the ways you could rock your flared jeans.
Flared jean တွေကို ဘယ်လိုအထာကျကျဝတ်ဆင်ကြမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
Accessories from @ootdmyanmarstore.
Pair your jeans withacrop top andacoat.
Pair your jeans withacolored tank top and sneakers.
Photo by @mia_aung
Top and pants from @fashionbuffet/ Shoes from @designandcomfortmyanmar/ Necklace from @dreamjewellrey
Pair your jeans withablack pointed shoes andawhite top.
Outfits from OOTD Yangon/ Earrings from @ootdmyanmarstore
Pair your jeans withapatterned top andastatement earrings.
Pair your jeans with white sleeved top and sneakers.
What’s your favorite combo? Comment below.
အကြိုက်ဆုံးစတိုင်ကို comment ပေးခဲ့ပါဉီး။